ngu admin nge 21-04-15
ngu admin ngo 21-03-05
ngu admin nge 21-02-20
ngu admin nge 21-01-15
Intshayelelo emfutshane yesihluzi sengxowa ye-pulse
ngu admin on 20-12-31
Isihluzo sengxowa yePulse sisihluzo sengxowa esicoca uthuthu ngokucoca uthuthu lwepulse. Inkqubo yokucoca i-ash ye-pulse bag filter yenziwe ngevalve ye-pulse, umbhobho wokuvuthela, isikhwama sokugcina umoya kunye nesixhobo sokulawula i-pulse. Umqokeleli wothuli lwegumbi kwakhona uxhotyiswe nge-cylinder. Esinye isiphelo sevalve yepulse yiconne...
Yintoni ekufuneka ihlawulwe ingqalelo xa isihluzo sengxowa sisetyenziswa
ngu admin on 20-11-27
Isihluzi sengxowa sisixhobo esikumgangatho ophezulu sokususa uthuli kumqokeleli wothuli ngoku. Esi sixhobo sokususa uthuli sinogxininiso oluphantsi kakhulu lokukhutshwa, ukusetyenziswa kwamandla amancinci kakhulu, ukusetyenziswa kwentsimbi ephantsi, izinga lokuvuza komoya eliphantsi, indawo encinci ehlala izixhobo, ukusebenza ngokukhuselekileyo kunye nokuzinza ...
Ukusetyenziswa kwekalika ekhawulezayo
ngu admin on 20-05-25
I-QUICKLIME iveliswa kwi-limestone equlethe umxube we-calcium kunye ne-magnesium carbonates. Zombini i-calcium quicklime ephezulu kunye ne-dolomitic quicklime ziveliswa ngokufudumeza iidiphozithi zekalika ekrwada kwi-oven ukuya kumaqondo obushushu angama-900. Le nkqubo ibizwa ngokuba yinkqubo yokubala. T...
Intshayelelo emfutshane yehonti yekalika ethe nkqo
Inkcazo yeMveliso I-kalika ye-kalika ethe nkqo ibhekiselele kwisixhobo sokwenza ikalika ukukhupha iklinka ngokuqhubekayo kwisahlulo esisezantsi sokutya okuphezulu. Ibandakanya umzimba othe nkqo we-onti, ukongeza kunye nokukhupha isixhobo kunye nezixhobo zokungenisa umoya. Ihonti yekalika ethe nkqo inokohlulwa ibe...
Iziko elime nkqo kwikalika libhekiselele kwisixhobo sokwenza ikalika ukukhupha iklinka ngokuqhubekayo kwinxalenye esezantsi yesondlo esiphezulu. Ibandakanya umzimba othe nkqo we-onti, ukongeza kunye nokukhupha isixhobo kunye nezixhobo zokungenisa umoya. Ihonti yekalika ethe nkqo inokohlulwa ngokwezi ntlobo zine zilandelayo ...
Iingxaki ekufuneka ziphetshwe ekuvelisweni kweekhilni zekalika ezilungele ukusingqongileyo
1) Ubungakanani be-limestone bukhulu kakhulu : isantya sokubala se-limestone sixhomekeke kwiqondo lobushushu apho ubungakanani besuntswana lekalika lidibana nomphezulu wekalika. Kwiqondo lobushushu elithile, izinga lokubala kwekalika lixhomekeke kubungakanani belitye likalika.
I-Calcium oxide esetyenziswa kwezoLimo, ICalcium oxide Production Line, Izixhobo zokuLungisa iCalcium Hydroxide, ICalcium Hydrooxide Processing, Ukwenza iCalcium Hydroxide, Ukwenza iCalcium Hydroxide,